Ikhaya – iAfrika
Uma uphupha ukuthi usekhaya lakho kusho izinto ezingafani kuya ngokuthi ungubani. Uma usemusha kusho ukuthi impilo yakho izoba mnandi. Uma unophathina kusho ukuthi bazothembeka futhi nizojabula ndawonye. Uzoba nezingane ezinamandla ezinempilo noma kunjani. Uma indlu ibukeka ithuthukile uzoba nezimali kodwa uma inganakekeliwe uzohlupheka ngokwezimali ikakhulukazi uma abantu bakhona bengakuphathi kahle. Uma uzakhela umuzi kusho ukuthi … Read more